गोरखाका ६ जना सहित गण्डकी प्रदेशमा २६८ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित » Gorkhapati News
निर्वाचन प्रणालि: अल्पमतले बहुमत माथि शासन ?
गुठी मास्नेलाई किन भोट ?
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं २ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार
वडा अध्यक्ष होस् त यस्तो
२०७८ माघ ८, शनिबार १४:५४ मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेशले कोरोना उपचारका लागि तोकेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख विकास गौचन कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा छन् । दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण यसअघि उनी पहिलो चरणमा कार्यरत छँदै संक्रमित भएका थिए ।
संक्रमणदर घटाउन संस्थागत आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने बताउँद आएका गौचनले आफू अहिले पनि संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने बताएका छन् । ‘यो महामारीलाई हलुका रुपमा नलिनुहुन अनुरोध छ,’ पुनसंक्रमित भइसकेपछि भनेका छन्, ‘अब संस्थागत आइसोलेनमा बस्नेछु ।’
डा। गौचनसहित प्रदेशका २ सय ५० जना बढी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा बढी प्रभावित भएका छन् । गण्डकीमा पछिल्लो एक महिनामै २ सय ६८ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । सबै स्वास्थ्यकर्मीको संक्रमण सक्रिय छ ।
निर्देशनालयको शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार पुस ९ देखि शुक्रबारसम्म ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । निर्देशनालयका आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र संयोजक नवराज शर्माका अनुसार संक्रमण पुष्टि हुने स्वास्थ्यकर्मीमा कास्कीका सबैभन्दा बढी छन् । उनका अनुसार कुल संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कास्कीका मात्रै १ सय ३८ जना छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनसार तनहुँका ४२ जना, लमजुङका २० जना, नवलपुरका १७ जना, बागलुङका ११ जना, पर्वतका १० जना, म्याग्दीका ९ जना, मुस्ताङका ३ जना र गोरखाका ६ जना छन् । निर्देशनालयले सबै संक्रमितको संख्या सामान्य रहेको र होम आइसोलेसनमै रहेको जानकारी दिएको छ ।
कोरोनाको महामारीको तेस्रो लहरमा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि तनहुँ, म्याग्दी लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरिसकेका छन् । तेस्रो लहरमा स्वास्थ्यकर्मी बढी प्रभावित हुन थालेपछि केही दिनमै सबै सवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यही अनुपातमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा केही दिनमा सबै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरु हुने सेवा नै बन्द हुन सक्ने निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
‘धमाधम सबैमा कोरोना देखिएको छ । यस्तै भयो भने २, ३ दिनमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने भएको छ ।’ उनले स्थिति भयावह आइसकेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे ।
सयौं विद्यार्थीहरुलाई एकैपटक सहभागी गराएर खेल खेलाउदै मन्टेश्वरी एसोसिएसन
को हुन, काठमाडौ-१६ मा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उठेका शान्जे ?
शंकास्पद वस्तु नभेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान सुरु